Sunday May 13, 2018 - 09:47:57 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanayo wadanka Afghanistaan ayaa sheegaya in Askar American ah lagu dilay qarax miino oo ka dhacay Degmada Bagraam oo katirsan Gobolka Barwaan ee dhaca woqooyiga wadankaasi.
4 askari oo American ah ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen, kuwa kalena ay dhaawacmeen kadib qarax miino oo lala eegtay gaari gaashaman oo ay wateen, xilli ay marayeen agagarka Qalcatu Nasru oo ku dhow Saldhiga ugu weyn ee ciidamada Mareykanka ay kuleeyihin wadanka Afghanistan.
Gaarigii qaraxa lala beegsaday ayaa isla goobta ku gubtay gabi ahaanba, waxaana la sheegaya in burburkiisa uu gaaray meelo ka fog goobta qaraxa uu ka dhacay.
War lagusoo qoray baraha internetka ee Imaarada Islaamiga ah ayay ku sheegatay Masuuliyada weerarkaan waxaana lagu xaqiijiyey dhimashada Askarta 4ta ee Americanka ah iyo Burburka gaarigii ay wateen.
Howl galkaan ayaa qeyb ka ah duulaanka loogu magac daray al khandaq oo imaarada islaamiga ah ay ku dhawaaqday waxa uuna imaanaya laba maalin kadib markii askari American ah iyo 4 katirsan ciidanka Komandooska Xukumada Kabul lagu dilay werar gaadma ah oo ka dhacay gobolka Lagman ee dhaca bariga wadanka Afganistaan.
Duullaanka Alkhandaq oo galay Isbuucii 3aad ayaa diiwan galiyey dilka ilaa 6 askari oo American ah oo uu kujiro sarkal sare iyo dhaawaca tiro kale, waxaana lagu xureeyey baaxad leh oo kuyaala wadanka afganistaan oo ay kujiraan 4 degmo oo muhiim ah.